I-Payraise Calculator AJAX Version isiphezulu! | Martech Zone
NgeSonto, Okthoba 1, 2006 NgoLwesibili, Okthoba 4, 2011 Douglas Karr
Vakashela I-Payraise Calculator
Uhlala wazi lapho nginyamalala izinsuku ezimbalwa - kusho ukuthi ngisebenzisa i-caffeine eningi futhi ngihlela ubuchopho bami. Enye yamaphrojekthi okuqala engake ngaba nawo ukuhlela uhlelo lwemininingwane yokusebenza kwabasebenzi kwiMicrosoft Access 2.0! Isici engisengeze kuso (njengoba umnyango wethu wakwa-HR ubufuna ukuthi wonke amanani agcwaliswe) bekuyi-calculator yokukhuphula amaholo. Ngayifaka njengefomu ku-database futhi imiphumela yaphrintwa embikweni.
Ngakhe leli sayithi kusuka ekuqaleni ngisebenzisa iDreamweaver (ngingumfana ol 'incwajana yokubhalela esikoleni… kodwa nginqume ukulidubula). Ngenze ihluzo ku-Illustrator. Ngisebenzise i-CSS yokuphela kokuphela kuka-100%, futhi ngibe nenguqulo ye-Print CSS (qhubeka uprinte imiphumela uzobona). Ingaphambili lalingakhuthazwa ama-37Signals… lihle futhi lilula, kepha lihle kancane. Ngisenayo imiphumela ekhonjiswa etafuleni - kepha lokho kungenhloso ngoba ngifuna abantu bakwazi ukukopisha nokunamathisela imiphumela ku-Excel noma kunoma iyiphi enye i-pogram. Kukhona ama-quirks amaningi acocekile mayelana nesicelo. Ngiyethemba uyayithanda!
Qiniseka ukuthi ubika noma yiziphi izimbungulu kimi! Isinyathelo esilandelayo sihlanganisa injini yokusesha kaJobe sisebenzisa Ngempela isiphetho sangemuva. Mhlawumbe ngempelasonto ezayo!
Idola elilodwa lezigidigidi ze-Youtube? Kungenzeka.